अार्थिक/अर्थ – Page2– Karnalikhabar
अर्बपतिका सन्तानको भड्किलो जीवनशैली
संसारमा धनले कसलाई पो पुगेको छ र ? आफूसँग जति सम्पत्ति भए नि थप आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता धेरैको हुन्छ । फेरि धन कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे धेरैलाई जानकारी पनि हुँदैन । एउटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भने धनी भएपछि
बाराका बाढी पिडितलाई ‘धुर्मुस–सुन्तली’ को राहत
सिमरा (बारा) - धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले दिएको राहत पाएपछि खुशी भएकी बारा रमौलीकी ७३ बर्षिया हरिनादेबी पासवानलाई राहत स्याहार्न हम्मे पर्यो । धुर्मुस सुन्तलीको सहयोगमा राहत बितरण गर्ने भनेर उपमहानगरले घरैमा सवारीको साधन
खारेज हुँदै ४ हजार मेगावाटका आयोजना
काठमाडौं । चार हजार दुई सय ३२ मेगावाटबराबरको विद्युत्तको लाइसेन्स लिएका ४१ आयोजना खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । लाइसेन्स लिएका तर उत्पादन अनुमतिपत्रको निवेदन दिए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका आयोजनाको लायसेन्स
काठमाण्डौ । आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा २५ बाणिज्य बैकले १९ खर्ब ५७ अर्ब २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । २५ बाणिज्य बैंकले यसअवधिमा कूल १६ खर्ब पाँच अर्ब ९५ करोड १५ लाख रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेका छन । नेपालमा भएका
साताको पहिलो दिन नै दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, कसले कमायो अनि कसले गुमायो ?
भदौ ४, काठमाण्डौ । साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ७८ दोहोरो अंकले ओरालो लागेर१ हजार ६ सय १७ दशमलव ९७ विन्दुमा बन्द भएकोछ । परिसूचक तल झरे पनि कारोबार रकम केही बढेकोछ । समग्रमा बजार ०.७२ प्रतिशतले ओरालो लागेको हो
आज सुन-चाँदीको भाउ घट्यो
काठमाडौं – हप्ताको पहिलो दिन आज सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । सुन आइतबार तोलामा २ सय तथा चाँदी ५ रुपैयाँ घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार सुन आइतबार तोलाको ५५हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
तराईमा बाढी पहिरो पीडितलाई राहत दिने भन्दै राजधानीका केही निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई अनिवार्य रकम ल्याउन उर्दी गरेका छन् । निजी विद्यालयहरुले विद्यालयको सयोग भन्दै सरकारलाई बुभाएर नाम कमाउन विद्यार्थीसग रकम उठाएका
कृषिमा तीन वर्षमा तीन खर्ब ३० अर्ब क्षति
काठमाडौं । व्यावसायिक कुखुरापालन गर्दै आएका रौतहट सोनरियाका किसान शिवशंकर यादव अहिले घर न घाटका भएका छन् । बैंकबाट ६६ लाख ऋण लिएर तीन वर्षअघि सुरु गरेको कुखुरा फार्म बाढीले बगाएपपछि उनी घर न घाटका भएका हुन् । फार्ममा ६० लाख
काठमाडौं । नेपाली महिला भलिबलको चर्चित टोली न्यू डायमन्ड एकेडेमीले मुख्य प्रायोजनको रुपमा शिवम् सिमेन्टको साथ पाएको छ । शिवम् सिमेन्टले नैकापको न्यू डायमन्ड एकेडेमी (एनडिए) लाई एक वर्षका लागि मुख्य प्रायोजनको सम्झौता गरेको
बाजुरा । स्थानीयबासीले आफूले तिर्न चाहेको कर बुझाउन आर्थिक रुपमा बढी भार व्यहोर्नु परेको छ कर तिर्न र कर चुक्ताको प्रमाण पत्र लिनका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढी वा महेन्द्रनगर नै जानु पर्ने बाध्यताले हैरानी भोग्नु